Daraasad:Geedka qorfuhu waxa uu ka caawiyaa jidhka gubitaanka subbagga xun - Horn Future
Daraasad:Geedka qorfuhu waxa uu ka caawiyaa jidhka gubitaanka subbagga xun
Daraasad cusub oo Mareykanka ayaa sheegtay in ka qayb noqoshada ama ku darsashada geedka qorfaha ee cuntada maalin kasta ay kaa caawin karto in uu yareeyo saameeynta subbagga ee caafimaadka dadka, iyo ka hortaggaa cudurada wadnaha iyo cudurka macaanka.
Waxa daraasadan sameeyay cilimi-baadhayaal ku takhasusay daweeynta nafaqadda,taas oo ay ku soo bandhigeen natiijooyinkooga hawlaha shirka ururka( American Heart Association)kaas oo qabsoomay muddaddii u dhaxeeysay 4-6 May oo lagu qabtay magaalada Minneapolis, Minnesota.
Waxa cilmi-baadhayaashani ay ku sameeyeen daraasadooda koox jiir ah kuwaas oo raacay hab cunto oo hodan ku ah subbagga marka lagu daro cunitaanka waxyaabo la sameeyay qorfaha muddo 12 toddobaad ah,waxana ay heleen in jiirkan miisaankiisu wax yar ka yaraaday kuwa kale,iyada oo heerarka sonkorta ee uu leeyahay ay wanaagsanaatay,marka la barbar dhigo jiirarkii kale ee aanan cunin waxyaabaha laga sameeyay qorfaha.
Kooxdan cilmi-baadhayaasha ah ayaa waxa ay cadeeyeen in habka cunto ee hodan ku ah subbagga uu xidhiidh la leeyahay korodhka halista cuduro badan sida cudurrada wadnaha iyo macaanka iyo buurnida/ cayilka, laakiin ka qayb noqoshada ama ku darsashada geedka qorfaha ee nidaamkan cunto waxa uu kaa caawin kara in uu yareeyo saameeynta xun ee ka dhalata subbaggan,waxana uu yareeya heerarka subbagga (cholestrol)ka dhiigga ku jira.
Waxa cilmi-baadhayaashu ay sheegeen in arrintan ay u sabab tahay qorfaha ay ku jirto heerar aad u sareeya oo ah maadada (Polyphenol) taas oo leh tilmaamo gaar ah oo ah ka hortagga bararka iyo buurnida.
Waxa hadii la xaqiijiyo xaaladdaha natiijooyinkan ay horseedi doonaan hore-umarinta ee kiniino ama tallaalo cusub oo laga sameeyo qorfaha kaas oo ka caawinaya si loo yareeyo faafitaanka cudurka wadnaha iyo cudurka macaanka.
Waxa kamid ah cuntooyinka uu ku jiro heerarka aadka u sareeya ee subbaggu saliidaha laga sameeyo dhirta, subagga,labeenta, baruurta xoolaha,subbagga riyaha,chocolate ka madow,saliidda kalluunka, looska, iyo hilibka warshaduhu farsameeyaan.
Daraasado hore ayaa ka digay cuntooyinka ay ku jirto baruurta aadka u sareeysa, oo ay ugu horeeyso cuntada loo yaqaano(fast food)ka ama degdeg ah taas oo kaliya aanan horseedin korodhka miisaanka, laakiin ay dhici karto inay dhaawac/ burbur u gaysato maskaxda bini’aadanka iyada oo horseeda xumaanshaha howl-qabadka garashada iyo burburka lafaha.
« Kenya: US halts aid to Health Ministry over graft	» Hogaamiyaha Koonfurta Sudan Kiir oo xilkii ka qaaday taliyaha sare ee ciidamada dalkaasi